Sidee u fahamsan nahay dimoqraadiyadda & xorriyadda madaniga ah? | Hadalsame Media
Home Maqaallada Sidee u fahamsan nahay dimoqraadiyadda & xorriyadda madaniga ah?
Sidee u fahamsan nahay dimoqraadiyadda & xorriyadda madaniga ah?
(Hadalsame) 24 Sebt 2019 – Dadkayga Soomaaliyeed sida ay Dimuqraadiyadda u fahamsan yihiin iyo sida dalalka reer Galbeedku ay ugu dhaqmaan waa kala labo.
Inta badan dadka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin:
*️⃣ In waxay doonaan ay samayn karaan
*️⃣ In cidday doonaan ay weerari karaan hadday ayaan lahayd af ama addin.
*️⃣ In Dhankay doonaan ay u dhoofi karaan
*️⃣ In qofkay doonaan ay gurigooda ku soo xareyn karaan, marti soori karaan ama jiif siin karaan oo uu la noolaan karo intii la doono, isagoo aaminsan aan lagula xisaabtami karin wixii uu geysto qofkii uu gurigiisa keenay.
*️⃣ In badeecadduu rabo uu qofku iibin karo, sicirkuu rabana uu ku iibin karo.
*️⃣ In intuu Taleefoon iska diro cidduu rabo u diri karo, wax alla iyo wixii uu doonana uu sheegi karo ama maleegi karo ama qoraal ahaan ugu diri karo shaqsiyaad ama hay’ad ama dal kale.
*️⃣ In qofku uu aaminsan yahay inuu leeyahay xuquuq iyo xorriyad aanan Duqdi/Tixsi korkiisa saaran looga duulin karin, iyadoo aan la soo xiri karin, su’aallo la weydiin karin, maxkamadna looga yeeri karin.
*️⃣ In uu la kulmi karo shaqsiyaad, shirkado ama dad ay xayiraad saartay dowladdiisa markuu doono isagoo aan wax oggolaansho ah ka heysan dowladdiisa.
*️⃣ Inuu durbaan iska tuman karo habeen iyo maalin xilliguu doono 24 saac.
*️⃣ Inuu leeyahay xasaanad diblomaasiyadeed oo wuxuu rabo uu ku sheegi karo, cidduu rabo uu kula kulmi karo meeshuu rabana uu mari karo dal iyo dibad iyadoo aan cidina hor joogsan karin.
*️⃣ Inuu Baskii dadka shacabka ah daad gureynayay uu markuu rabo Boosteejada keeni karo, markuu rabana gurigiisa ama garaashka isaga xareyn karo iwm.
Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in waxyaabahaas oo dhan aysan ka shaqeyn dalalka lagu sheego inay yihiin kuwa salka u dhigay xuquuqda aadanaha iyo xoriyadda bani’aadamka.
Iska daa inaad dowladda waddanka arrimeheeda gashee xitaa awood uma lihid inaad muusigga aad dhegeysanayso ama telefishinka gurigaaga ka daaran codkiisa aad sare u qaaddo haddii saacaddu ay gaarto 22:00 habeennimo. Haddii aad buuqa sii badisana Boolis baaba laguugu yeerayaa oo kugu amraya in aad joojiso waxa aad waddo ama codkaaga aad hoos u gaabsato.
FG: Qofku iskama sameyn karo wax alla iyo wuxuu doono
Waxaa Diyaariyay: Yaxye Y Khasaaro
Previous articleMessi & Ronaldo oo codayntooda ku muujiyay sida ay isu arkaan! (Arag sida u codeeyeen)
Next articleDHEGEYSO: Maxaa kala qabsaday Donald Trump & gabar 16-jir ah oo CIMILADA u dhaqdhaqaaqda?! (Daawo)